လင်းဦး(စိတ်ပညာ) _ Lin Oo: ရုရှားနှင့် ဂျော်ဂျီယာစစ်ပွဲ (၁၁-၈-၂၀၀၈)
ရုရှားနှင့် ဂျော်ဂျီယာစစ်ပွဲ (၁၁-၈-၂၀၀၈)
1. ရုရှားဂျက်လေယာဉ်များသည် Kodori Gorge ကို ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းနယ်မြေ မှာ ၂၀၀၆ခုနှစ်တွင် ဂျော်ဂျီယာတပ်များ ရယူခဲ့သော နယ်မြေဖြစ်ပါသည်။ ရုရှားတပ်များသည် Abkhaz နယ်စပ်တွင် တပ်များစုလျက် ရှိပါသည်။ ရုရှားစစ်တပ်က ဂျော်ဂျီယာစစ်သင်္ဘောကို ပစ်ခတ်နှစ်မြှပ်ခဲ့သည်ဟု ဆိုပါသည်။
2. ရုရှားဝန်ကြီးချုပ် Vladimir V.Putin သည် ပီကင်းမှ စနေနေ့တွင် ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။
3. ဂျော်ဂျီယာမြို့တော်ဖြစ်သည့် Tbilisi မြို့၏လေဆိပ်ကို ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ တိုက်ခိုက်မှုသည် ဥရောပသမဂ္ဂ အထူးကိုယ်စားလှယ် မရောက်လာမီအချိန်တွင် ဖြစ်ပါသည်။ ပျက်စီးမှု အနည်းငယ်သာ ရှိပါသည်။
4. ဂျော်ဂျီယာသတင်းများအရ ရုရှားလေကြောင်းမှ တိုက်ခိုက်မှုတွင် Gori မြို့၌ ပြည်သူ ၆၀ခန့် သေဆုံးခဲ့သည်ဟု ဆိုပါသည်။ တနင်္ဂနွေနေ့တွင် ရုရှားတပ်များ ဆက်လက် ချီတက်လျက် ရှိပါသည်။
5 တောင်ဖက် Ossetia မြို့တော် Tskhinvali ကို ဂျော်ဂျီယာတပ်များက အမြောက်များဖြင့် ပစ်ခတ်ခဲ့ပါသည်။ ပြင်းထန်စွာ တိုက်ခိုက်ပြီးနောက် ရုရှားတို့သည် မြို့တော်ကို ရယူခဲ့ပါ သည်။ တောင် Ossetia မြို့တော်တစ်ခုလုံးနီးပါကို ရုရှားတို့ ထိန်းချုပ်ထားပါသည်။
ရုရှားတပ်များသည် ခွဲထွက်ပြည်နယ် တောင် Ossetia ပြည်နယ်မှနေပြီး တင့်ကား၊သံချပ်ကာများဖြင့် ချီတက်ကာ ဂျော်ဂျီယာသို့ တနင်္ဂနွေနေ့၌ တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး တိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။ ရုရှားတပ်များသည် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့သည့် (၃)ရက်အတွင်း ကြည်းတပ်များကို အသုံးပြုပြီး ဂျော်ဂျီယာ အလယ်ပိုင်းတွင်ရှိသော Gori မြို့သို့ တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်ဟု ဂျော်ဂျီယာ အရာရှိများက ပြောဆိုလိုက်သည်။
ဂျော်ဂျီယာမြို့တော် Tbilisi ကို ဗုံးကြဲခြင်းသည် ရုရှားကိုထောက်ခံထားသည့် ခွဲထွက်ရေး တောင် Ossetia နှင့် Abkhazia ပြည်နယ်များ လုံခြံုမှုအတွက်သာမက ယခင်ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စု၏ ပြည်နယ် တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီး အမေရိကန်ကို လိုလားသည့် ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံ၏ တပ်မတော်အား အင်အားချိနဲ့သွားစေရန် အတွက် ဖြစ်ပါသည်။
ဂျော်ဂျီယာက အပစ်အခတ်ရပ်စဲရန် ကမ်းလှမ်းပြီး ၎င်း၏တပ်များကို တောင် Ossetia မှ ရုတ်သိမ်း ပြီးနောက် ရုရှား၏ ထိုးစစ်ကြောင့် နိုင်ငံတကာစိုးရိမ်မှုနှင့် အမျက်ဒေါသဖြစ်မှုကို အကြီးအကျယ်ဖြစ်စေခဲ့ပြီး အမေရိကန်နိုင်ငံနှင့် အပြင်းအထန် သံတမန်ရေးရာ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုများ ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။ ရုရှားက ဂျော်ဂျီယာကို သိမ်းရန် ရည်ရွယ်ချက် ရှိ/မရှိ မသိရသေးသော်လည်း အနောက်နိုင်ငံများက ကျောထောက်နောက်ခံ ပေးထားသည့် ဂျော်ဂျီယာသမ္မတကို ဖယ်ရှားရန် (သို့မဟုတ်) စစ်တပ်ကို ဖျက်စီးရန် ရည်ရွယ်ချက်ရှိနိုင်သည်ဟု အနောက်နိုင်ငံ အဆင့်မြင့်အရာရှိနှစ်ဦးက ပြောကြားလိုက်သည်။
အမည်မဖော်လိုသည့် အနောက်သံတမန်တစ်ဦးက ရုရှားနှင့် ဂျော်ဂျီယာတို့သည် အမှန်တကယ် စစ်ပြေငြိမ်းသည့် အနေအထားသို့ ရောက်ရှိရန် ဝေးပါသေးသည်ဟု ပြောလိုက်ပါသည်။ ရုရှားနှင့် ယခင် စစ်အေးကာလ ရန်သူများအကြား အငြင်းပွားတိုက်ခိုက်မှုများ အရှိန်အဟုန် ကြီးထွားလာမှုသည် ဆယ်စုနှစ်များအတွင်း အမြင့်ဆုံးအဆင့်သို့ ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ အမေရိကန် သမ္မတဘွတ်ရှ်သည် ဂျော်ဂျီယာကို ဒီမိုကရေစီ အမှန်တကယ်ကျင့်သုံးသည့် နိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုထားပြီး ၎င်း၏ စစ်တပ်အင်အား ခိုင်မာစေရေးအတွက် အကူအညီပေးကာ ဂျော်ဂျီယာအား နေတိုး (NATO)၏ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာရေးအတွက် တိုက်တွန်းလျက်ရှိပါသည်။ ဂျော်ဂျီယာသည် ရုရှားနှင့် အာရှအလယ်ပိုင်းမှ ရေနံများ အနောက်နိုင်ငံများသို့ ပို့ဆောင်ပေးသည့် အဓိကလမ်းကြောင်းအဖြစ် ရှိနေပါသည်။
ရေတပ်၊ လေတပ်နှင့် ဒုံးကျည်တိုက်ခိုက်မှုများ ပါ၀င်သည့် စစ်ရေးအရေးယူမှုသည် ဆိုဗီယက် ပြည်ထောင်စုပြိုကွဲပြီးနောက် ရုရှား၏ အကြီးမားဆုံးသော စစ်ရေးအရေးယူမှုပင်ဖြစ်ပါသည်။ အမေရိကန် သမ္မတဘွတ်ရှ်နှင့် ဥရောပခေါင်းဆောင်များက သံတမန်ရေးအရ ပြင်းထန်စွာ သတိပေးနေသော်လည်း ရုရှား၏တိုက်ခိုက်မှုသည် တဖြည်းဖြည်း အရှိန်ကြီးထွားလာနေပါသည်။ အချို့သော အနောက်နိုင်ငံများသည် သဘာဝဓါတ်ငွေ့အတွက် ရုရှားအား အကြီးအကျယ်မှီခိုနေရပြီး အမေရိကန်အနေဖြင့်လည်း အီရန်၏ နယူးကလီးယားလက်နက် ခြိမ်းခြောက်မှု လျော့ပါးစေရန် အမှန်တကယ်လိုလားပါက မော်စကို၏ ပူးပေါင်းမှုကို များစွာလိုအပ်လျက် ရှိနေပါသည်။
ပီကင်း အိုလံပစ်ပွဲတွင် ရောက်ရှိနေသည့် သမ္မတဘွတ်ရှ်က ရုရှား၏ တိုက်ခိုက်မှုကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဝေဖန်လိုက်ပြီး အပစ်အခတ် ချက်ခြင်းရပ်စဲရန်် တောင်းဆိုလိုက်ပါသည်။ အမေရိကန် ဒုသမ္မတ Dick Cheney က ရုရှား၏ ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်မှုသည် အဓိပ္ပါယ်မရှိသည့် လုပ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်း၊ ကျူးကျော်မှု ဆက်ပြီးဖြစ်နေပါက အမေရိကန်အပါအဝင် နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်း ဆက်ဆံရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်သည့် အကျိုးဆက်များစွာ ရှိနိုင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့မှုအပေါ် အိမ်ဖြူတော် ပြောရေးဆိုခွင့် ရှိသူက သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။
ရုရှားအရာရှိများက ပြောဆိုရာတွင် တောင် Ossetia ကို ဂျော်ဂျီယာတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် တိုက်ပွဲတွင် အရပ်သား အများအပြား သေဆုံးခဲ့ရသည်ဟု ပြောကြားလိုက်ပါသည်။ သို့သော် အနောက် သံတမန်များနှင့် စစ်ဘက်အရာရှိများက ရုရှားက စစ်ပွဲကို ပိုမိုကြီးထွားအောင် တိုက်ခိုက်လာမည်ကို စိုးရိမ်ကြပြီး Abkhazia တွင် ဒုတိယစစ်မျက်နှာခင်းကာ ဒေသတော်တော်များများကို လွှမ်းမိုးမှုရအောင် ဆောင်ရွက်လာနိုင်မည်ကို လည်း စိုးရိမ်ကြပါသည်။
တနင်္ဂနွေနေ့တွင် ရုရှားမှ အမြောက်များဖြင့် Gori မြို့ကို ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ပါသည်။ Gori မြို့မှာ ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံတွင် အဓိက စစ်ရေးတည်ဆောက်မှုနှင့် ပို့ဆောင်ရေး အချက်အခြာကျသောမြို့ ဖြစ်ပါသည်။ Abkhazia ပြည်နယ် ခွဲထွက်ရေးသမားများ၏ ဒေသတွင် ရုရှားလေထီးတပ်နှင့် ၎င်း၏မဟာမိတ် Abkhaz ခွဲထွက်ရေးသမားများ စုပေါင်းပြီး ဂျော်ဂျီယာအထူးတပ်ဖွဲ့များကို တိုက်ခိုက်လျက်ရှိပြီး ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံ၏ အငြင်းပွားမှုမရှိသော နယ်နမိတ်၏ နယ်စပ်ကို ဖြတ်ကျော်ရန် ကြိုးစားလျက်ရှိသည်ဟု ဂျော်ဂျီယာအစိုးရ အရာရှိများက ပြောကြားပါသည်။
ရုရှားက Tbilisi မြို့၏ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ကို ပြင်သစ်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Mr. Bernard Koucher လေယာဉ် မဆင်းသက်မီ ဗုံးကြဲခဲ့သည်ဟု ဂျော်ဂျီယာ အစိုးရ အရာရှိများက ပြောကြားပါ သည်။ Mr. Bernard Koucher မှာ စေ့စပ်ညှိနှိုင်းရေးအတွက် ဥရောပသမဂ္ဂမှ စေလွတ်လိုက်သူ ဖြစ်ပါသည်။ မြို့တော်အပြင်ဘက်တွင်ရှိသော လေကြောင်းဆိုင်ရာစက်ရုံကို ရုရှားမှ ဗုံး (၂)ကြိမ် ကြဲခဲ့ပါသည်။ Abkhazia ကမ်းရိုးတန်းတွင် ကင်းလှည့်သည့် ရုရှားသင်္ဘောက ၎င်းတို့အား ပစ်ခတ်ခဲ့သည့် ဂျော်ဂျီယာ လက်နက်ပစ် သင်္ဘောအား ပစ်ခတ်နှစ်မြှပ်နိုင်ခဲ့သည်ဟု ရုရှား ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ပြောဆိုလိုက်ပါသည်။
ရုရှားအစိုးရက ရုရှားတပ်များ ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံသို့ ၀င်ရောက်တိုုက်ခိုက်မှုအပေါ် ငြင်းဆိုခဲ့ပြီး ယခုလို အရေးယူဆောင်ရွက်မှုသည် ရုရှား၏ငြိမ်းချမ်းရေးထိန်းသိမ်းမှုတပ်ဖွဲ့များအား ဂျော်ဂျီယာတပ်များက တိုက်ခိုက်ခဲ့မှုအပေါ် တန်ပြန်အရေးယူဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်ဟု ပြောဆိုပါသည်။
ရုရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အဆင့်မြင့်အရာရှိတစ်ဦးက ရုရှားအနေဖြင့် တနင်္ဂနွေနေ့ အစောပိုင်းအထိ ဂျော်ဂျီယာနယ်နမိတ်အတွင်းသို့ ၀င်ရောက်ရန် ရည်ရွယ်ခဲ့ခြင်း မရှိဟု ပြောကြားပါသည်။ ဘွတ်ရှ်အစိုးရက ရုရှား၏ကျူးကျော်မှုကို ကန့်ကွက်ပြီး ကုလသမဂ္ဂလုံခြံုရေးကောင်စီ၏ ဆုံးဖြတ်မှုကို ရယူရမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားလိုက်ပါသည်။
ကုလသမဂ္ဂတွင် ရုရှားသံအမတ်နှင့် အပြင်းအထန်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပြီးနောက် အမေရိကန်သံအမတ် Zalmay Kulilzad က ဂျော်ဂျီယာသမ္မတ ရာထူးမှဆင်းပေရန် ရုရှားအစိုးရ၏ ပြောဆိုမှုကို ရှုတ်ချလိုက်ပါသည်။ ရုရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနှင့် တယ်လီဖုန်းဖြင့် အပြန်အလှန် ပြောဆို ကြရာတွင် ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းအရ ရွေးကောက်ထားသည့် ဂျော်ဂျီယာသမ္မတ ရာထူးမှ ဆင်းရမည်ဟု ပြောဆိုခဲ့မှုမှာ လုံးဝလက်ခံစရာ မရှိကြောင်းဖြင့် အမေရိကန် သံအမတ်က ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ဂျော်ဂျီယာအစိုးရက တပ်များကို ပြန်လည် ပြန်ရုတ်သိမ်းရန် ကြိုးစားနေကြသော်လည်း ရုရှာအစိုးရက တပ်များပြန်လည်ရုတ်သိမ်းရေးကို ခွင့်ပြုခြင်းမရှိဟု ၀ါရှင်တန်ရှိ အမေရိကန်အရာရှိများက ပြောကြားလိုက်ပါသည်။
ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံသမ္မတ Mr.Saakashvili အနေဖြင့် ၎င်း၏သမ္မတသက်တမ်းတွင် ဂျော်ဂျီယာကို ခွဲထွက်ရေးနယ်မြေ Abkhazia နှင့် ၁၉၉၀ခုနှစ်များ အစောပိုင်းက တိုက်ခိုက်မှုများမှ လက်တွေ့ ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့် ရရှိခဲ့သည့် ရုရှားကို လိုလားသည့် နယ်မြေဖြစ်သော တောင် Ossetia တို့နှင့် ပြန်လည် ပေါင်းစည်းရေး ကြိုးပမ်းရာမှ တင်းမာမှုများ တိုး၍ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါနယ်မြေများတွင် နေထိုင်သူ အများစုကို ရုရှားက Passport များ ထုတ်ပေးခဲ့ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေး ထိန်းသိမ်းမှုတပ်များကို တပ်စွဲထားစေခဲ့ပါသည်။ ယခင်အပတ်က တောင် Ossetia နယ်မြေတွင် ဂျော်ဂျီယာ တပ်များ မြို့တော်ကို သိမ်းပိုက်ရန် ကြိုးပမ်းမှုမှ တိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာ ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ တိုက်ခိုက်မှုသည် ဂျော်ဂျီယာတို့ဘက်မှ ကြိးစွာသော မှားယွင်းတွက်ချက်မှုကြီးပင် ဖြစ်ပါသည်။
သတင်းပို့ချက်များမှာ အမျိုးမျိုးဖြစ်နေပြီး အနည်းဆုံးသေဆုံးသူ (၁၀၀)မှ အများဆုံး (၂၀,၀၀၀)ခန့် ရှိသည်ဟု ဆိုပါသည်။ သို့ရာတွင် ထိုသို့သတင်းပို့မှုများသည် သေချာစွာ တွက်ချက်ထားသော သတင်းပို့မှုများ မဟုတ်ပါ။ ရုရှားအစိုးရ အရာရှိများက ရုရှားနိုင်ငံသို့ တောင် Ossetia ပြည်သူများ (၃၀,၀၀၀) ကျော် ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သွားသည်ဟု ဆိုပါသည်။
ရုရှားက ပြောကြားရာ၌ Ossetia ပြည်သူများကို ကာကွယ်ရန်ဖြစ်ပြီး ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်သူ ဂျော်ဂျီယာများကို အပစ်ပေးခြင်းသာ ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသကဲ့သို့ ဂျော်ဂျီယာတို့က ဂျော်ဂျီယာနယ်မြေထဲရှိ ခွဲထွက်ရေးနယ်မြေမှ တိုက်ခိုက်မှုကို တွန်းလှန်ရန်နှင့် ရုရှားတပ်များ တရားမဝင်တပ်စွဲထားခြင်းမှ မောင်းထုတ်ရန်ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုပါသည်။
ရုရှားအစိုးရ အရာရှိများက ရုရှားသတင်းအေဂျင်စီများကို ပြောကြားရာ၌ တနင်္ဂနွေနေ့နှောင်းပိုင်း ညတွင် ဂျော်ဂျီယာတပ်များ တောင် Ossetia နယ်မြေရှိ Tskhinvali ကို တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသည်ဟု ဆိုပါသည်။
ဂျော်ဂျီယာ အစိုးရအရာရှိများက စနေနေ့တွင် သတိပေးပြောကြားရာ၌ ရုရှားများသည် Gori မြို့ကို သိမ်းရန် ရည်ရွယ်နိုင်သည်ဟု ဆိုပါသည်။ Gori မြို့သည် Tskhinvali မြို့မှ (၄၅)မိနစ်ခန့်သာ မောင်းရပြီး ဂျော်ဂျီယာ စစ်တပ်အတွက် အဓိက တပ်စွဲရာနေရာဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းသည် တောင်ကြားတွင်တည်ရှိပြီး ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံ၏ အရှေ့နှင့်အနောက် တစ်ဝက်စီ ဆက်သွယ်ထားသော ပင်မလမ်းကြောင်းပေါ်တွင် ရှိပါသည်။
ဂျော်ဂျီယာ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန အရာရှိဖြစ်သူ Shota Utiashvili က ပြောကြားရာ၌ ရုရှားတို့၏ တင့်ကားနှင့် စစ်တပ်များသည် Gori မြို့၏ ကီလိုမီတာ အနည်းငယ်အတွင်းသို့ ရောက်ရှိနေပြီး ဂျော်ဂျီယာ နိုင်ငံကို နှစ်ခြမ်းပိုင်းနိုင်ရန် ကြိုးပမ်းလျက်ရှိသည်ဟု ဆိုပါသည်။ ၎င်းက ပြောကြားရာ၌ ရုရှားတို့သည် ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံကို သိမ်းပိုက်ရန် ကြိုးပမ်းပါက နိုင်ငံအတွင်း နေရာအနှံ့ ပြောက်ကျားစစ်ပွဲများ ဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟု ဆိုပါသည်။ ထို့အပြင် ၎င်းက ပြောကြားရာ၌ ၎င်းတို့အနေဖြင့် လူသားချင်း စာနာထောက်ထားသော အကူအညီများလိုပါကြောင်း၊အကြောင်းမှာ ထောင်သောင်းမက ဒဏ်ရာရသူများနှင့် ပြည့်နှက်နေပြီး လက်နက်များလည်း လိုအပ်လျက်ရှိကြောင်း ပြောကြားသွားပါသည်။
တနင်္ဂနွေနေ့ ညနေ၌ Gori မြို့ အနီအနားတွင် အမြောက်နှင့်တင့်ကားမှ အမြောက်ပစ်သံများ ကြားနေရပါသည်။ အပစ်အခတ်ရပ်နားစဉ် ဂျော်ဂျီယာစစ်တပ်မှ Gori မြို့အတွင်းသို့ ၀င်ရောက်၍ မြို့ကို ကာကွယ်ရန် ကြိုးပမ်းနေကြပါသည်။
လူနာတင်ကားများ Gori မြို့နှင့် Tbilisi မြို့အကြား လွန်းပျံပြေးလျက်ရှိပြီး Gori မြို့မှ မိသားစုများသည် ကားများနှင့် မြည်းလှည်းများဖြင့် ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်လျက် ရှိကြပါသည်။ ရုရှား ထိန်းချုပ်ထားသည့် နယ်မြေမှ Eredv နှင့် Prisi ကျေးရွာများအနီး ဂျော်ဂျီယာနယ်မြေအတွင်းသို့ အမြောက်များဖြင့် ပစ်ခတ်လျက်ရှိသည်ကို မြင်ရကြောင်း The New York Times သတင်းစာ၏ သတင်းထောက်က ပြောကြားပါသည်။
Abkhazia လက်တွေ့ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနယ်မြေအစိုးရ၏ ဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Mr. Gvindzhiya က Gori မြို့သို့ ရုရှားတပ်များ တိုက်ခိုက်ဝင်ရောက်မှုသည် ကြီးစွာသော ပြဿနာဖြစ်ပြီး ဂျော်ဂျီယာနှင့် တိုက်ရိုက်ရင်ဆိုင် တိုက်ခိုက်ခြင်းပင် ဖြစ်ကြောင်း သတိပေးပြောကြားပါသည်။ Abkhazia ခွဲထွက်ရေးနယ်မြေတွင်လည်း တိုက်ခိုက်မှုများ ပိုမိုဖြစ်ပွားလျက် ရှိပါသည်။
တနင်္ဂနွေနေ့ အစောပိုင်းက ရုရှားအနေဖြင့် ၎င်း၏တပ်များကို ၆,၀၀၀ အထိ (၂)ဆ မြှင့်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ လေထီးတပ်သားများဖြစ်ပြီး ပင်လယ်နှင့်အနီးရှိ လေဆိပ်သို့ ရဟတ်ယာဉ်များဖြင့် ပို့ဆောင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ Abkhazia နယ်မြေတွင် ဂျော်ဂျီယာအနေဖြင့် တစ်ခုတည်းသာ ထိန်းချုပ်ထားနိုင်သည့် Kodori Gorge တွင် တိုက်ပွဲများ ပြင်းထန်စွာ ဖြစ်ပွားလျက် ရှိပါသည်။
၀ါရှင်တန်တွင် Secretary Rice အနေဖြင့် စနေနေ့ည တစ်လျှောက်လုံး ဘွတ်ရှ်အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့၏ အခြားအရာရှိများနှင့် လုံခြံုရေးကောင်စီ ဆုံးဖြတ်ချက်အတွက် အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။ အမေရိကန် သံတမန်များက ပြောကြားရာ၌ ၎င်းတို့အနေဖြင့် အင်္ဂါနေ့မတိုင်မီ လုံခြံုရေးကောင်စီအနေဖြင့် မဲဖြင့် ဆုံးဖြတ်ရန် မလိုလားသေးကြောင်း ၊ အကြေအလည်ဆွေးနွေးပြီး ရုရှားအစိုးရကို အများသိ အရှက်ရစေရန်သာ ဖြစ်ကြောင်း ၊ လုံခြံုရေးကောင်စီ ဆုံးဖြတ်ချက်သည် ပြင်းထန်မှုမရှိသည့်အပြင် အမြဲတမ်း လုံခြံုရေးကောင်စီ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သည့် ရုရှားမှ ဗီတိုအာဏာဖြင့် ပယ်ချမည်သာ ဖြစ်ကြောင်း ၊ မျှော်လင့်ရသည်မှာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးအတွက် ဖိအားပေးရန်သာ ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
လတ်တလောအချိန်တွင် ဂျော်ဂျီယာနှင့် အနောက်နိုင်ငံ သံတမန်အရာရှိများက ပြောကြားရာ၌ ဂျော်ဂျီယာအနေဖြင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး အဆိုပြုချက်ကို ရုရှားသို့ ကမ်းလှမ်းကြောင်း ၊ သို့ရာတွင် ရုရှားအရာရှိများက လက်ခံရန် အသိအမှတ်မပြုဟု ဆိုပါသည်။
By လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on at Monday, August 11, 2008
အင်း ။ သတင်းအတွက် ကျေးဇူးဗျာ။
တတိယကမ္ဘာစစ် ဖြစ်မှာတောင် ကြောက်ရတယ်။ ရုရှားက တော်တော် ရိုင်းတယ်ဗျ။
August 12, 2008 at 7:52:00 AM GMT+6:30
သတင်းတွေ အစုံအလင် ဖတ်ရတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးပါ ကိုလင်းဦးရေ.
ယဉ်ကျေးတဲ့ လူ့ အသိုင်းအဝိုင်း မှာ ငုပ်လျှိုးနေတဲ့ ရိုင်းစိုင်းမှုတွေ ထွက်လာတာ မြင်ရတာပဲဗျို့.
August 12, 2008 at 7:57:00 AM GMT+6:30
ဒီသတင်းကို သေချာဖတ်ချင်နေတာ။ အင်္ဂလိပ်လို လိုက်ဖတ်ဖို့က အခုတလော အချိန်မလောက်ဘူး ဖြစ်နေတယ်။ အလုပ်များနေတာရယ် မြန်မာပြည်က ဦးလေး ဆုံးသွားလို့ အသုဘ အခမ်းအနားအတွက် ကူညီပေးဖို့ သူငယ်ချင်းတွေကို အဝေးကနေ စီစဉ် ညွန်ကြား နေရတာရယ်။
အခုမှပဲ အရန်သင့်လေး ခူးခပ်ပြီးသားလေး မြန်မာလို ဖတ်လိုက်ရတော့ အတော်ကို ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။
August 12, 2008 at 12:25:00 PM GMT+6:30